Aiza no ahitako ny voromailalan'ny voromailala: famaritana sy famokarana karazana - Poultry farming - 2019
Pikantsary pigeona sy mponina ao an-tanàna
Eo an-dalan'ny tanànanay - betsaka ireo voromailala lehibe. Ireo no vorona mahazatra indrindra eto amin'ny planeta, saingy tsy ny olon-drehetra no tsara vintana hahita ny zanany. Maro amintsika no misaintsaina ny fisehon'ireo voromahailala kely, ny endrik'izy ireo dia azontsika jerena, aiza no misy ireo voromailala.
Ahoana ny endriny?
Ny endriky ny fizotran'ny taolam-piainana
Sakafo sy fanatodizany
Tadiavo ny voromailala
Ny dingan'ny fampiroboroboana
Ahoana ny fomba hanomezana ilay zazavavikely hita ao an-trano?
Aiza no misy ny voromailala kely?
Ny razamben'ireo voromailala dia nipetraka tany amin'ny faritra be vato akaikin'ny Ranomasina Mediterane. Ny voromailala maoderina, mandova ity lamina ity, manao ny akany amin'ny toerana mitovy. Feno toera-ponenana ao an-tanàna eo ambanin'ny tetezana, eny amin'ny tafon-trano, dia afaka manao ny akaniny eo ambanin'ny fanambanin'ny varavarankely. Ireo toerana ireo dia nosoloina vato ihany koa. Manoloana ny fetran'ny tanàna, dia misy voromailala ao anaty hazo ao anaty lavadavaka. Ny vorona lehibe dia miahy ny fiarovana ny zanany.
Zava-dehibe izany! Ny voromahailala dia manafina ny tranon'izy ireo amin'ny mason'olombelona amin'ny toerana sarotra aleha, satria raha misy olona mikitika ny atody na atody ao, na dia eo aza ny fitiavan-janany, dia afaka mamela ny akaniny sy ny atody izy ireo raha tsy miandry ny toaka. .
Fotoana vitsy aorian'ny nahaterahana, ireo zana-boromahailala ireo dia rakotra volomparasy tanteraka, manana vaventy lehibe izy ireo. Tokony ho iray volana eo ho eo, ny volom-borona dia mipoitra eo amin'ny toerana misy volom-borona, ary amin'ny faran'ny volana faharoa dia manjary manjary henjana ilay tovolahy kely voalohany.
Maro amintsika no tia mamahana voromailala, nefa miaraka amin'ny aretina isan-karazany koa izy ireo.
Mitovy avokoa ny karazana voromailala rehetra: matahotra noho ny tsy fisian'ny mason'ny ray aman-dreny, baobao misokatra, miandry sakafo, manilika elatra tsy tapaka. Nahoana no tsy mora hita ny voromailala? Voalohany indrindra, Ireo voromailala dia manafina azy ireo ho fiarovana sarotra ny hahatratra toerana; Faharoa, ireo voromailala tena kely ao anatin'ny iray volana sy tapany dia tsy mitovy amin'ny habeny amin'ny vorona lehibe.
Saingy izy ireo dia afaka manavaka ny felam-boninkazo mandritry ny roa volana voalohany amin'ny fiainana, amin'ny vorona lehibe, ny volony mamirapiratra ary mamirapiratra kely. Manana fananganana ambany ihany koa ny zazakely kely, raha oharina amin'ny voromailala lehibe. Ary izy ireo manidina kely fotsiny. Noho izany, raha manandrana ianao, dia hita sy tapa-kevitra ny pigeon pigeons raha tsy misy fahasahiranana be.
Ao anatin'ny toe-javatra voajanahary dia miaina dimy taona ny voromailala. Ireo dia vorona, eo amin'ny fomba fiainana sy ireo fitsipiky ny olona manana zavatra hianarana.
Fantatrao ve? Mihabetsaka ny ankamaroan'ny akoho vao teraka, amin'ny andro faharoan'ny andro dia mihamafy avo valo heny noho ny fahaterahana.
Ny voromahailala, izay mibaribary, dia miara-miasa amin'ny olom-boafidiny, ny fahasarotana amin'ny fananganana akany sy ny olana amin'ny fanabeazana ny taranany. Ny lehilahy dia nisafidy toerana iray ho an'ny akanim-borona, miandry ny voromahailala hankasitrahana, aorian'ny fanekena dia manomboka manangona fitaovana fananganana.
Manorina ny akaniny amin'ny mololo sy ny rantsankazo izy. Ny lehilahy dia mifototra amin'ny fitaovam-pitaovana, ary ny vehivavy - amin'ny dingana amin'ny fananganana akanim-borona, manangona ahitra sy sampana ho an'ny tenany. Ataon'izy ireo tsara kokoa ny isan-taona isan-taona.
Ahoana no ataon'ireo voromailala? Ny dingam-pamokarana ataon'ireo vorona ireo dia amin'ny ankapobeny, ny lohataona ary ny fiandohan'ny fararano, rehefa hafanana. Matetika ny vavy dia mametraka atody roa, matetika - isaky ny iray, ary dia manindry azy miaraka amin'ny lahyizay indraindray mamela ny fitsangatsanganana ny voromailala ary mamahana azy, mandritra ny fiaraha-mikorana ary miantso azy io tsy ho ela. Ny dingan'ny fampidirana dia maharitra roapolo andro.
Fantatrao ve? Indraindray dia mety manomboka manokatra atody vaovao ny voromailala roa herinandro aorian'ny fisehoan-jazakely. Ny zokiny dia tsy maintsy miatrika ny rainy mihitsy. Raha maty ny reniny, dia hanangana zanaka irery ny lahy, fa ny samochka tsy afaka miatrika izany toe-javatra izany - maty ireo akoho.
Amin'ny fiafaran'ny vanin-taonan'ny roapolo andro, ny zana-kisoa dia mipetaka eo amin'ny atody ary tsy misy afaka manala azy ao anatin'ny ora vitsivitsy. Ny ray aman-dreny dia manipy ny kofehy. Raha tsy izany dia tokony ho very ny akoho, hiala amin'ny akany, raha tsy izany ho faty noho ny tsi-fahizany izyary ny voro-manidina tsy hamonjy azy.
Mipoitra avy ao amin'ny akorany ny poti-jazakely kely dia tsy mahita afa-tsy ny maso: mihidy ny maso, tsy misy fijery, vatana mangatsiaka mihintsy miaraka amin'ny voina mahatsikaiky, malemy be, malemy be sy manakona tsy tapaka. Ny lanjan'ilay voromailala efajato dia eo amin'ny folo grama. Ny lehibe dia lehibe lehibe raha oharina amin'ny vatana. Misy tombontsoa iray amin'izany rehetra izany, satria ny fijerin'ny zazakely kely dia tsy mamitaka ny mpiremby.
Ny voromailala dia manjary haingana kokoa noho ireo taova hafa ary herinandro aorian'ny nahaterahany, dia lasa goavam-be izy io, amin'ny andro faha-12 dia mahatratra ny halehiben'ny tsipìkan'ny voromailala lehibe izy, ary amin'ny faha-telopoloandro fahavalo dia tapitra tanteraka ny fananganana ny vavony. Rehefa mandeha ny fotoana, dia hijery tsara tsara izy io.
Inona no ataon'ny voromailala hohanina amin'ny zanany kely? Amin'ny andro voalohandohany, ny akoho kely dia entina amin'ny karôzôma manokana iray, izay mitovitovy amin'ny tsiranoka vavy, dia ahitana sela epitheliale, manankarena amin'ny singa marindrano, proteinina sy ny matavy, ary tompon'andraikitra amin'ny fivoarana haingana sy haingam-pandeha haingana. Izany no antsoina goitre milk.
Mianara momba ny karazam-biby malaza indrindra ho an'ny voromailala.
Ny ankizy dia mandray valo ambin'ny folo andro, ary avy eo dia mihamihetsika tsikelikely. Ny zana-koditra alefa aloha dia homena amin'ny roa na telo ora, ary ny faharoa amin'ny roapolo ora.izay mety hahatonga azy ho faty mihitsy aza. Noho izany dia tsy mitovy ny fivoaran'ny havana roa taovam-pananahana: ny voalohany, raha matanjaka, dia afaka manidina amin'ny iray volana, ny faharoa - tsy aloha roa volana.
Amin'ny fikarakarana amim-pitandremana ny ray aman-dreny, tsy misy hafa, tsy hitan 'ny be sy ny maro, mitombo ny akoho, mahazo tanjaka sy lanjany. Ny ray aman-dreny dia tsy mahavita velively ny zanany kely, manasitrana sy mikarakara azy ireo na ny vavy na ny zana-vavy. Amin'ny fiafaran'ny volana voalohany, dia manomboka miala ao amin'ny akanim-borona ireo voromailala, mitsambikina avy eny amin'ny toerana mba hampiofanana ny elany alohan'ny sidina.
Saingy mandra-pianaran'izy ireo ny mandeha dia tsy mamela ny akaniny izy ireo ary miankina tanteraka amin'ny ray aman-dreniny, izay miaro azy ireo amin'ny fomba rehetra. Ny fivoaran'ny voromailala lava dia fikolokoloana haingana toy ny vorona hafa. Ary aorian'ny roa volana, dia tsy dia misy fahasamihafana amin'ny fisehon'ny voromailala olon-dehibe izy ireo, manidina sy mahaleo tena izy ireo. Ny onja no tsy maintsy teraka sy miaina ao anatin'ny toe-piainana sarotra, izay ahafahany miaina mafy indrindra amin'izy ireo.
Fantatrao ve? Ny voromahailala dia manana fahitana manjavozavo izay manavaka ny loko rehetra sy ny taratra ultraviolet, afaka mahita ny lalana mankany amin'ny trano avy amin'ny faritra rehetra manerana ny tany izy ireo, afaka manidina kilometatra arivo tsy misy fialan-tsasatra. Ny mpahay siansa dia nanendry azy ireo ny lohan'ny vorona manana saina voajanahary, satria mahatsiaro ny zava-drehetra ataon'izy ireo amin'ny fahatarana fito-faharoa.
Indraindray dia mety hijanona tsy misy ray aman-dreny ny voromailalan'ny voromahailala, izay vao teraka vao teraka, fa tsy ny tovovavy mbola tanora ihany no mahatakatra amin'ny fomba voalohany ny manidina, ka mety hianjera avy ao amin'ny akany. Raha toa ka tonga tampoka ny hahita tovovavy iray, ary tapa-kevitra ny hitondra azy any an-tranony hivoaka, dia tokony hahatsiaro ny andraikitra amin'ny fiainany sy ny ilana ny hanaraka ny fitsipiky ny sakafo sy ny fikarakarana.
Ny fikarakarana ao anatin'ity toe-javatra ity dia mila hatsaram-panahy, fiheverana, firaiketam-po sy fiahiana. Zavatra voalohany Mila mafana sy rano. Ho an'ny fampivoarana tsara ny zanakao, mila ampiana vitaminina novidina tao amin'ny pharmacy ianao. Ny zazakely kely dia atahorana ho marary, ka ny fisorohana dia mila mifehy ny fahadiovan'ny rano sy ny fitaovana fisotroana ianao.
Inona no tsaratsara kokoa hanombohana ny sakafon'ny voromailala ao an-trano? Amin'ny herinandro voalohany amin'ny fiainana, ireo voromailala dia azo sakanana amin'ny alàlan'ny fitsaboana medikaly tsy misy fanjaitra ho an'ny fofona malefaka nefa tsy voageja. Ny voromahailala roapolo andro aorian'ny nahaterahany dia afaka manao tsy misy ray aman-dreny amin'ny fikarakarana sakafo ara-dalàna sy fisotroan-dronono.
Tokony ho voalanjalanja ny famokarana akoho.Noho izany, ny sakafo fototra dia mifangaro amin'ny antsasaky ny voapoizina, ary ampiana ranom-boankazo vitsivitsy hanampy amin'ny fanampiana. Ny poti-tsakafo dia mihinana ny ranom-boasary, ny varimbazaha, ny vary orza, ny taovam-boa tatỳ aoriana, ny zavatra rehetra aloha dia tsy maintsy alaina sy mihosotra, dia azo omena manontolo izany. Ho an'ny voromailala malemy, afaka manomana sakafo manokana avy amin'ny menaka varimbazaha vita amin'ny varimbazaha ianao ary vary voadio vita amin'ny varimbazaha, 5% ny vahaolana glucose dia mihalevona amin'ny fisotroana.
Raha mitandrina ny fepetra rehetra momba ny fikarakarana ianao, mitandrina isan'andro sy mikarakara amim-pitiavana ireo akoho, dia ho haingana izy ireo. Ny voromailala mahatsiravina dia saka-mavitrika mavitrika miaraka amin'ny fiankinan-doha mahafinaritra. ihany koa Amporisihina mba homen'ny voromailala vakim-paritra ny fotoana..
Ho an'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny aretin'ny voromailala dia ampiasaina ireto fanafody manaraka ireto: "Enrofloks", "Biovit-80", "Lozeval".
Ny androm-piainan'ireny vorona ireny dia mety ho dimy ambin'ny folo taona eo ho eo. Matetika izy ireo dia zatra amin'ny olona mikarakara azy, ary raha miresaka matetika amin'ny taom-pandrosoana izy dia mandray azy amin'ny sandriny, dia haharitra ela ny fifankahazoana sy ny fifandraisana mafana.
Zava-dehibe izany! Ilaina ny fifampiraharahana ho an'ny zazakely miaina amin'ny fahababoana.
Ny zavaboary dia efa mialoha mialoha fa ny zana-kisoa dia somary mahazatra ny mason'ny olona, ​​noho izany, ny ankamaroan'ny olona aza tsy maminavina ny fomba fijeriny sy ny toerana iainany. Izany dia manamora ny tsy fahafantarana ny akanin'ireo vorona ireo, ny fivoaran'izy ireo haingana ary ny toetra, ny natiora manan-danja amin'ny fampitandremana. Lasa mazava tsara fa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahita ny voromailalan'ny voromailala - eo ambany elatry ny ray aman-dreniny izy ireo ao amin'ny toerana azo antoka sy azo antoka. Raha misy olona mahatsikaritra ny akaniny, dia tadidio fa mety ho lasa kamboty sy maty ny zazakely vao teraka, noho ny hadisoanao, ka mila mialokaloka ianao ary tsy manala ireo voromailala eo an-tananao, na inona na inona tadiavinao. Mila fihetsika feno fandeferana sy tsara fanahy amin'ireo vorona ireo isika, satria miteraka hatsaram-panahy kely eo amin'ny fiainantsika izy ireo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Pikantsary pigeona sy mponina ao an-tanàna